Warbixin:Kooxo Magafayaal ah oo dhibaato ku haya ganacsatada Soomaalida ah ee Dubai | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Ganacsiga Warbixin:Kooxo Magafayaal ah oo dhibaato ku haya ganacsatada Soomaalida ah ee Dubai
Warbixin:Kooxo Magafayaal ah oo dhibaato ku haya ganacsatada Soomaalida ah ee Dubai
Ganacsatada Soomaalida ah ee ku nool dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa la sheegay in sanadihii lasoo dhaafay ay dhibaato xoogan kala kulmi jireen koox magafa ah oo sheegta inay ka tirsan yihiin ciidamada Amniyaadka magaalada Dubai.
Kooxda magafaayasha ah ayaa ganacsatada Soomaalida ah caga juglayn, xarig, lacago baad ah oo laga qaado, Musaafuris iyo dhibaatooyin kale ku haya ganacsatada.
Kooxdan ayaa ah kuwo isugu jira dad u dhashay Imaaraadka iyo nin Somaali ah oo haysta dhalashada dalka Jabuuti.
Ganacsato badan ayaa la sheegay in baasabooradooda laga qaaday kuwaasi oo aan heli karin Basabooradaasi ilaa ay ka bixiyaan lacag badan oo lagu qiyaasay ku dhowaad $60,000 oo doolar.
Hadaba hoos ka akhriso warbixin lagu soo koobay dhammaan dhibaatooyinka ganacsatada
Afartii Mageffe ee Dubai & Ganacsatada Soomaalida ee dalka Isku taga Imaaraadka Carabta
“Waxaa intaas noo dheer, waxay nimankaa amniyaadka sheeganayaa iska kaaya hortaageen in aanu maxkamadaha iyo cadaaladda wadanka aragno, si aanu dhibka na haysta ula socod siino” — sidaas Waxaa yiri ganacsade magaciisa ku soo gaabiyey Omar Lababaale oo degan Dubai.———–Dhibaatada iyo dulmiga lagu hayo Soomaalida ayaa waxaa ka dambeeya koox isku xidhan oo ka kooban Amniyaadka Dubai iyo ganacsade reer Djibouti ah. Kooxdaas oo maslaxado shaqsiyadeed ku fushanaya mas’uuliyaddii iyo suldadii lagu aaminay.
Caddalad darada GS ee Dubai ay kacabanayaan waxaa kamid ah
4: inta badan lama siiyo wakhti ay hantidooda kusoo urur sadaan ama fursad ay ku iibiyaan hantidooda maguurtada ah. Arintan xanuunka badan ee ka baxsan hab-dhaqanka aadanaha iyo Shuruucda Caalamiga ah iyo heerka ilaalinta heshiiskii Geneva, ee ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo xuquuqda dadka aan dalkooda joogin ee ganacsatada Soomaaliyeed ee Dubai ku nool lagu haayo waxay soo socotay muddo sanado ah.
Cubayd abu Cali, UAE, tel:0502488985— waa ninka madaxda ka ah Shabaddan, wuxuuna haystaa amniga Dubai gaar ahaan qaybta soomalida. Abu Cali, waa ninka awooda buuxda u haysta in uu ganacsada somalida siduu doono ka yeelo, iyada oo aan wax maxamadka ah la soo taagin. Ninkani meel looga dacwoodo majirto oo aan illahay ahayn.
2:Maxamed Catiiq —- Abu Cabdullahi, waxaa uu u dhashay Imaaraadka.
4:Bashiir Khaliif Muuse (Bashir Mageffe) waxaa uu u dhashay dalka Djibouti.
Mr.CCC, arintaas dulmiga ah iyo dadka kulug lehba aad buu uga dheregsanahay waayo? Somali badan oo ganacsato ah ayaa cabasho ugu Tagtay hotelka uu Dubai ka degan yahay si uu dulimkaa wax ugala qabto wuxuuna u balanqaaday in uu arintaas wax kaqabanayo.welise wax Ugama suurtogalin.
SEM Group gaar ahaan charles waxaa laga codsanayaa in uu gacansiiyo Mr.Ahmed Barre maadaama uu daraadiis loo haysto loogana masaafirinayo wadanka emiraadka
2. Dowladda Soomaaliya waxaa laga codsanayaa in ay emiradka ko codsato in Ahmed Barre u cadaalada helilo loona diro koox xaqiijisa danbiga ahmed Barre u xidhanyahay sida ugu Shakespeare badan.
3. qof kasta oo wax u qaban kara Dulmane Axmed Barre, oo ku xiran xabsiga Caweer, ee Dubai, waxaa laga codsanayaa inay u istaagaan sidii Axmed Barre, caddaalad uu u heli lahaa iyo waliba sidoo uu xoriyadiisa dib ugu heli lahaa.
Previous articleWarbixin: Doorashada Jarmalka iyo rajada Turkiga ee Midowga Yurub
Next articleSweden oo magangalyo u diiday haweenay 106 sano jir coryaan ah